Best Meelo tagidda Malabka In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Best Meelo tagidda Malabka In Europe
Best Meelo tagidda Malabka In Europe
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo(Last Updated On: 28/08/2020)
Runtii ma jiro meel ka fiican oo lagu jeclaado oo ka doorbidid Goobaha Malabka ee Yurub.
Fudayd ee safarka tareenka, waxaad booqan kartaa tan oo meelaha qurux badan on your Malabka. Iyada oo fara badan qorraxda, talgaley qurux badan, canab ah, oo aan dhammaanayn hotel iyo makhaayad fursadaha taataabtay, layaabna iguma ahan in meelaha ugu wanaagsan ee maciishadu ay gaaraan Yurub! Halkan waxaa noo talooyin top waayo, inta badan booqasho samaynta qof gaar ah.
Goobaha malab-qaadka ee Yurub – Positano, Italy
Positano waa tuulo dhinaca dhagaxii weynaa ee koonfurta Italy ee Amalfi Coast. Sida laga soo xigtay halyeeygii hore ee abuuray by Neptune, Ilaaha reer badda kuwaas oo ahaa ka mid ah jacaylka qandhicil ah. Its Dedieu dhagax dixeed iyo yacday, jidadka cidhiidhi ah iyo jiidh leh dukaamada iyo makhaayadaha waa waxa caan ku tahay. waa in adiga iyo saygaada aad booqato Chiesa di Santa Maria xayaawankan soo bandhigtay 13-qarnigii icon ah Byzantine of Mary Virgin ah.
Waa maxay sababta aan u shaqeeyaan off qaar ka mid ah in cake arooska iyo madaxa Dariiqa ilaahyada raad tug, kaasoo ku xidha Positano magaalooyinka kale ee xeebaha sixir. Dhamee aad maalin off leh cabbayso iyada oo jidadka qadiimiga ah, ogaadeen makhaayadaha dhab ah, iyo guryaha taariikhiga ah cunugtii oo ku saabsan buurta iyo ururinta cuntada dhab ah. Waxaad la Yaabteen laga yaabaa sida aad abid ka tago doonaa Malabka!
Tuuladan xiisaha badan iyo jaceylka ah waa meel aan caadi aheyn oo lagu nasto maalmo unoqon doonta mid kamid ah meelaha aad kahesho malabyada qaarada yurub. hortiisa beige ah, pink, guryaha jaalaha ah iyo Terra-cotta ahina uu hoos dhinaca xeebta si crystal buluug biyaha Mediterranean caan adduunka oo dhan iyo waxa uu ahaa martida mesmerizing qaybtan captivating ee xeebaha Talyaaniga qarniyo.
Like sarre u galay riyo, Positano waa meel ku fiican si ay ugu dabaal isagoo jacayl! Waxaa jira waxyaabo badan oo loo sameeyo; aad tahay hubi inaad haysato a safarka ee Meyeydaan.
Milan in ay Tareenadu Salerno
Goobaha malab-qaadka ee Yurub – Hvar, Croatia
Markay tahay helitaanka meelahaaga ugu fiican ee gaadhaayada qaxwada ee Europe, Hvar, Croatia inta badan waa liiska lamaanaha! Daanka-ka tagtey quruxda dabiiciga ah, magaalooyinkii deyrka qadiimiga ah iyo buluug ah aan dhamaadka lahayn ee Adriya: Croatia waa doorasho qaali ah oo loogu talagalay barafka-gaaban ama jacaylka nasasho yar. Iyada oo fara badan qorraxda, canab ah, iyo fursadaha makhaayad, waad jeclaan doontaa goortaad qaan-garowga qaaradda Yurub ka tahay halkaan cajiibka ah.
Degeen xeebta Dalmatian Croatia ee, Hvar waa ugu caansan caga jasiiradda xagaaga ee dalka. Waxaan ognahay Aroos noqon karaan qaali, si aad u noqon doonaa faraxsanahay in la ogaado in waxa la og yahay in ay ka dheeraad ah oo la awoodi karo liiska Magangelyo-doonka Dalxiiska ee Yurub!
Tani magaalada deyran ku yar ka buuxa naqshadaha Gothic waa taam ugu fiican ee labada isqabta raadinaya vibes dabacsan yar taariikh iyo meelaha lagu jiro maalinta. Iyada oo u dhoofaysa waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee si aad u aragto Croatia guud ahaan-iyo aynu u wajihi, sidoo kale hab wanaagsan oo lagu soo maro a Malabkajaceylka bishan, Uber ayaa si rasmi degay gobolka, laakiinse hubaal jidka ha laga yaabaa in aad u malaynayso in.
Save A Tareen uusan si toos ah u Hvar safraan, Croatia. Waxaan sameyn, si kastaba ha ahaatee, u safraan xiriir saldhigyada in aad ka heli karto meesha aad rabto inaad tagto!
UberBoat ee Croatia
Qalabka gaadiidka caanka ah waa sii daayo UberBoat ee Croatia, taas oo kuu sahlaysa badan sidii ay u raaxaysan maalin badda on badda Adriya hore la dhalaalayay. Horey ayaa looga bilaabay Miami iyo Istanbul, UberBoat waa waxa dhici lahaa haddii ay SUV xaqiraad wada helay doonni la gaar ah. Your charter on-call noqon doonaa sida ay fududahay in la ballansan on your Uber app sida baabuur oo diyaar u noqon doono Croatia oo dhan in kale oo caan ah goobaha dalxiiska sida Split, Dubrovnik, iyo Korcula Island.
Goobaha malab-qaadka ee Yurub – Zurich, Switzerland
Switzerland Waxaa laga yaabaa inaysan aheyn meesha ugu horeysa ee maskaxda lagu soo dhigo markii aad ka fikirtid meelaha qafaalashada Honeymoon ee Yurub, laakiin waxa ay xaqiiqdii waa Dayda. In kastoo yar oo qaraabo size in dalalka badan oo Yurub, Switzerland leeyahay muuqaal dabiici fiican. tuulooyinka picturesque, magaalo casri ah, dhaxalka dhaqanka hodanka ah iyo hortegi lahaa oo lamid ah aad Malabka haddii aad soo booqato xilliga qaboobaha, guga, xagaaga ama dhici.
Zurich waa koraya City Dhaqan iyo magaalooyinka top in ay soo booqdaan. The haad ekayd, biyaha hortooda muuqaal dabiici ah promenades, iyo buuraha barafka safashada ee asalka u samaysaa sawiro cajiib ah! A talooyin dhawr ah hawlo ka mid ah; Socodka gacanta ee gacanta ku wareegsan Lake Zurich inay aritani qarkiisa magaalada. Rent paddleboat a si ay u arkaan magaalada ka xagal gaar ah. Marka saarnaa, waxaad qaadan kartaa in Vistas jaceyl tuulooyinka quaint-raadinta ku wareegsan oo, weheliyay Swansea deggan.
Haddii adeeganaya dheemman waa ajendaha, ka dibna aad tahay meel sax ah! Waxaad ka heli doontaa badan oo ku saabsan Zurich ee Bahnhofstrasse, oo inta badan loogu magac daray Fifth Avenue ee Switzerland. In watchmakers luxe Zurich iyo jewelers, iyo sidoo kale dukaamada, jirrabin dukaameeysatada la Quruxdiisa qaab suuqa.
Our ugu danbeysay caga waa – Rome, Italy
magaalada caasimada Italy waa u roon yahay laba qof ee isqaba guurkiisii. waa mid ka mid ah ugu soo booqday on liiska Meelo tagidda Malabka In Europe, Waxaa waa qumman yahay inay ku raaxaystaan ​​dhowrkii maalmood ee ugu horreeya nolosha guurka. From ay jidadka cobbled iyo dalka durkiya si ay u matxafyada, tiyaatarada, iyo jaceyl maqaayado, waxaad yeelan doontaa waayo-aragnimo aan dhammaadka lahayn in ay wada raaxaystaan.
Waa in aad soo booqato The amphitheaters Roman! Waxay waxaa loo yaqaan dunida oo dhan ay waynaanta iyo fiiro gaar ah u faahfaahsan. tiyaatarada madhan yihiin si ay u eeg. Marka ay bilaabanto tusayaan qaab farshaxan opera fiican, waayo-aragnimo ah waa adag tahay in lagu qeexo.
Markhaati ka noqoshada waxqabadka opera tooska ah ee qoob ka ciyaarka Roomaanka waa inay kujirtaa liiskaaga wax la qabanayo.
Waayo, labada isqabta ka magaalooyinka kale ee dalka Talyaaniga soo socda in ka badan, gaarey Rome tareen waxay noqon karaan ikhtiyaarka ugu fiican ee. Roma Termini, Rome rail ku xiran kala duwan oo Talyaani iyo magaalooyinka Yurub. Leenahay aad kursiga ka hor. Isticmaal Save A Tareen inay jartaan oo aan lacag safarada tareenka aad ku daqiiqo.
Waxaan rajeyneynaa inaan ku siiney waxoogaa dhiirigelin ah oo ku saabsan meelaha aad gaareyso qaxwadaada qaxbaha Yurub. Hubi in aad safar tareen oo dhan iyada oo loo marayo Save A tareenka si loo hubiyo in si degdeg ah, adeega la awoodi karo!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit leh link si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhoneymoon-destinations-europe%2F - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa / fr si / es ama / iyo luuqado badan.
#Malabka #hindiga europetravel romanticdestinations
Beer Route – Qamri Best In Europe By tareenka
Tareenka Safarka Belgium, Tareenka Safarka ee Britain, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe